Nahoana ianao no manonofy momba ny fametahana ny volonao?
Manazava tsara ilay nofy, izay nanapaka ny volony, dia ilaina ny mandray ireo tsipiriany hafa momba ny torimaso. Mihatra ity fampahalalana ity: iza no manapaka ny volony, inona no hitan'izy ireo, inona no tsapanao, sns.
Ho an'ny firaisana ara-drariny, nofinofy ny nofinofiny, mampanantena ny fifandraisana amin'ny fitiavana, angamba ianao hiara-miasa amin'ny vadinao. Misy ihany koa ny fanazavana izay nofinofisina izay nanapaka ny volo, dia maminavina fanombohana vaovao eo amin'ny fiainana. Ny fahitana alina izay itenenanao fohy dia tandindon'ny faniriana hizara amin'ny zavatra tsy ilaina, angamba amin'ny fifandraisana na amin'ny zavatra niainana.
Ny fandikana ny nofy, izay tsy maintsy notapahanao ny volonao, dia miankina amin'ny olona nanao izany. Raha nosintonina tamin'ny namany ny volonao dia fampitandremana fa tsy tokony hatoky azy ianao raha ny marina, satria tsy mitongilana izy ary te hanao ratsy. Ny fanimbana ny volonao amin'ny tenanao dia midika fa amin'ny hoavy dia tokony hiandrandra zava-manahirana amin'ny lafiny ara-materialy ianao, ary hitranga izany amin'ny alàlan'ny fahadisoanao. Ny fahitana amin'ny alina, izay manapaka ny volonao amin'ny mpanety iray, dia maminavina famerenana lehibe, tanterahina noho ny fanampian'ny olona tsy mahazatra. Mba hahitana ny volon'ny ankizilahy iray ao amin'ny nofy, dia tsy te-hivoatra ianao ary handray fanapahan-kevitra lehibe amin'ny tena fiainana. Ny torimaso izay manapahanao ny volonao amin'ny olon-kafa dia marika iray manintona izay manondro fa amin'ny raharaham-barotra rehetra dia ho tsara vintana ianao , ary izany dia mety mahakasika ny fitiavana sy ny sehatra ara-barotra.
Mpampianatra nofinofy, izay nofinofy iray mba hanapahana ny volo amin'ny olona hafa, mandika teny, ho fahombiazana sy voninahitra eo amin'ny fiainana. Raha nanao izany ianao tamin'ny sitrapon'olombelona, ​​dia asehon'izany fa raha ny marina dia manaisotra ny hetaheta sy ny fanirian'ity olona ity ianao.
Inona no manakenda ny tongotra havia?
Famantarana - orana amin'ny andro fampakaram-bady
Nahoana no nofy ny fanangonana zavatra?
Afaka mitafy ny zavatra aorian'ny olona efa maty ve aho?
Inona no nofinofin'ny nofom-biby?
Nahoana no manonofy ny ra?
Inona ilay nofinofy?
Miraratra manoloana ny varavarana fidirana - famantarana famantarana Rosiana
Famantarana ny lohataona
Evanjely Epifania - inona no tsy azo atao sy ny fomba handaniana androany?
Tavoahangy amin'ny ririnina - famantarana
Inona no toetran'ny toaka?
Inona no nofinofin'ny kitten momba ny zava-misy amin'ny nofinofy?
Inona avy ireo nila mitady?
Mila filanjana linoleum aho?
Justin Bieber dia nanipy an'i Sophia Richie
Inona avy ireo rindrina?
Fanangonana akanjo - fararano 2014
Bara fanatanjahan-tena - vokatra
Fahavitan 'ny tadaboka
Fialambolin'ny fararano sy ny fitondrana vohoka
Ny famantarana ny zodiac dia Scorpio - toetra sy mifanaraka amin'ny famantarana hafa
Vovonan'ny sira ho an'ny sary
RoE no fitsipika amin'ny ankizy
Hypothiazide - famantarana ny fampiasana
Dokam-barotra ho an'ny pasipaoro ho an'ny zaza
Famantarana - mianjera amin'ny fasana
Ankizy fotsy hoditra
Ny asa tanana avy amin'ny milina fanoratana taratasy
Manao ahoana ary ny hafiriana no handraisana ny aty?
Trondro anaty vilany
Ariana Grande sy Big Sean